Akụkọ - Ogwe ịsa VS Isi ejiri ịsa aka
ogwe mmiri ịsa ahụ
ogidi ịsa ahụ
ngwaahịa ụlọ ịsa ahụ ndị ọzọ
Mbadamba ụrọ na urinal
Ihe mgbochi mmiri kichin
Ebe a na -esi kichin
Ihe mkpuchi igwe anaghị agba nchara
Ngwaahịa nchara ndị ọzọ
ọrụ nka igwe
Ogwe ịsa VS Isi aka ịsa aka
N'ezie, maka ndị na -arụ ọrụ n'ọfịs, ụzọ kachasị mma isi gwuo ike n'ụbọchị na -arụ ọrụ bụ ịsa ahụ dị ọkụ mgbe ị lọtara. Ya mere, mgbe ọ na -abịaịsa ahụ, mgbe ahụ, anyị ga -ekwu maka ngwa ịsa ahụ, n'ihi na ugbu a ọnọdụ ndụ adịla mma, ụdị ndụ ndị mmadụ agbanwekwara, yabụ ngwa ịsa ahụ abụrụla ihe dị iche iche. M na -ejikarị ihe kacha n'ụlọ bụịsa isi, mana n'eziokwu, na mgbakwunye na ịsa ahụ, enwere ngwaahịa mara mma karịa, bụ ịsa ogwe. E jiri ya tụnyere ịsa ahụ ọdịnala, ịsa ahụogwe nwere ikuku ikuku dị elu. Ọ bụ naanị na ọ bụghị mmadụ niile nwere mmasị na ya. Na ụfọdụ ndị mmadụ na mma ụlọ ịsa ahụ, maka ịsa ahụogwe na ịsa ahụ isi nke ka mma, na -eche mgbe niile enweghị ike ịme mkpebi ziri ezi. Yabụ taa, anyị ga -ahụ ka esi ahọrọ n'etiti ha abụọ!
Akụkụ kasịnụ nke ịsa ogwe bụ na ọdịdị ya mara mma n'ezie, na-enyekwa ndị mmadụ mmetụta nke ịdị ogologo. Na iji usoro a dabara adaba, ọ nwere ike ịdị mma nke ukwuu iji zere ịgbasa. Na ụfọdụ ịsa ahụ dị eluogwes nwekwara ọtụtụ ọrụ, dị ka ikpo ọkụ ozugbo agbakwunyere, okpomoku oge niile nwere ọgụgụ isi, ịhịa aka n'ahụ, nke nwere ike gboo mkpa nke ndị dị iche iche. A na -edozi nsogbu nke ịba ụba na nnukwu ọrụ nke ala n'oge nrụnye mana ụdị ịsa ahụogwe dịkwa ntakịrị ọnụ. Dịka ọmụmaatụ, n'ihe gbasara ọnụ ahịa, ihe dị oke elu dị otú ahụ ga-adịrịrị ọnụ karịa ngwaọrụ ịsa ahụ nkịtị. Nhazi nke ịsa ahụogwe dị mgbagwoju anya karịa nhazi nke ịsa ahụ, yabụ ọ bụrụ na enwere mmebi ma ọ bụ ọdịda na usoro ojiji, ọ na -esiri gị ike ịrụzi.
N'ezie, ọtụtụ ezinụlọ na-eji aka eme ihe isi ịsa ahụ, tumadi maka ego aka ji isi ịsa ahụ dị ọnụ ala, yana ikwu okwu, nwụnye dịkwa oke nfe. N'ezie, enwere ọtụtụ ụdị aka ejiriisi ịsa ahụ, yabụ na ha dịkwa mma maka ime ụlọ ịwụ nke nha dị iche iche. Ụdị ịsa ahụ dịkwa mma maka iji ya, nrụgide mmiri a chọrọ dịkwa obere, yabụ na -azọpụta mmiri. Agbanyeghị, ọ nwekwara adịghị ike nke ya, ya bụ, ọ nwere ike nwechaghị ọrụ, ma mgbe nrụgide dị elu, ọ ga -ebute ngwa ngwa na mmiri na -efesa, na -eme ụlọ ahụ oke mmiri.
Yabụ n'eziokwu, ọ bụrụ na ịmaghị otu esi ahọrọ n'etiti ha abụọ, ị nwere ike họrọ nha nke nha ime ụlọ ịwụ na mkpa nke gị. Ọ bụ ezie na ọrụ ịsa ahụogwe bụ n'ezie karịa nke ịsa ahụ aka, ọ pụtaghị na ọrụ ya niile dị anyị mkpa. Karịsịa ma ọ bụrụ na ọ bụ naanị ndị agadi na ụmụaka nọ n'ụlọ ma ha amachaghị banyere ọrụ ya, mgbe ahụ ọrụ ndị a bụ ọrụ nkịtị, ọ baghị uru ịzụta ha n'ụlọ.
Oge ezipụ: Mee-10-2021
Ndụmọdụ maka ịzụrụ ihe na-asachapụ kichin
Gịnị Bụ Mgbidi Ntọala Mgbidi?
Akụrụngwa arụ ọrụ n'ime kabinet kichin
No.9 Zhongzhen Road, Luocun, Obodo Shishan, District Nanhai, Foshan City, Guangdong Province, China.